🤗🤗🤗သားသားမီးမီးတို့တွေနဲ့ ခရီးတစ်ခါထွက်ဖို့ အရေးပြင်ရဆင်ရ နဲ့ ခရီးထွက်ရဖို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား….????🤗🤗🤗 – YANGON STYLE
🤗🤗🤗သားသားမီးမီးတို့တွေနဲ့ ခရီးတစ်ခါထွက်ဖို့ အရေးပြင်ရဆင်ရ နဲ့ ခရီးထွက်ရဖို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား….????🤗🤗🤗
😍😍😍ချစ်ရတဲ့ ဖေဖေမေမေ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့တွေနဲ့ ခရီးထွက်ဖို့ သက်တောင့် သက်သာရှိတဲ့ ခရီးစဉ်တွေရှာဖွေရခက်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား..???😍😍😍
👉👉ဒေါ်လာဈေးတွေတက်နေလို့ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာမယ်…ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်းရ စားရမယ့် ခရီးစဉ် တစ်ခုကို အောက်တိုဘာ သီတင်းကျွတ်အချိန်လေးသွားရဖို့ အတွက် ရှာဖွေနေပါသလား ????🥰🥰
👉👉ဒါဆို လူကြီးမင်းတို့အတွက် ဒီပို့စ်လေးကို ဆက်ဖတ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ…🥰🥰
👉👉လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို တစ်ခုတည်းအဆင်ပြေစေမယ့် သင်္ဘောခရီးစဉ်လေး တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ….🥰🥰🥰
👉👉ရန်ကုန် မှ စင်ကာပူကို5Stars အဆင့်ရှိ Singapore Airlines လေယာဉ်ကြီးဖြင့် ထွက်ခွာပြီး..စင်ကာပူ၏ နာမည်ကြီး orchard မှာ ၂ညတာ တည်းခိုးရင်း ဈေးဝယ်ပတ်ကြမယ်…လည်ပတ်ကြမယ်…🧺🧺
👉👉သင်္ဘောကလည်း ပီနန် နဲ့ လန်ကာဝီ ၂မြို့လုံးကို လည်ပတ်ဦးမှာဆိုတော့….အားလုံးပေါင်း ၃ မြို့တောင်သွားရောက်လည်ပတ်ရဦးမှာ ဆိုတော့ တန်ပီးရင် တန်တယ်….မြို့၃မြို့တောင်လည်ပတ်ရတာဆိုတော့ ကလေးတွေနဲ့ အိတ်တွေနဲ့ အဆင်မပြေမှာလည်း မစိုးရိမ်ရပါဘူးရှင်🥰🥰
👉👉သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းကပ်လို့ တစ်မြို့ချင်းစီ ဆင်းလည်ရင်လည်း အထုတ်တွေ သယ်ဖို့အတွက်စိတ်ပူ စရာမလိုပါဖူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြို့တွေမှာလည်ပါတ် ပြီးတာနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာဘဲ ပြန်လည် အိပ်စက်အနားယူမှာ ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်…😍😍.
👉👉ဒီလိုအကောင်းစား 5*သင်္ဘောကြီးစီးရမယ်ဆိုတော့ဈေးများ မယ်လို ့တွေးပြီးမပူလိုက်ပါနဲ ့World Connect Travels and Tours မှ ချစ်ခရီးသည်တို ့အတွက် Buy 1 Get 1 40% off Special Promotion ဖြင့် သက်သာဆုံးသော သင်္ဘောခရီးစဉ်လေးကိုစီစဉ်ပေး လိုက်ပါပြီ 🥳🥳
👉👉Special Promotion ကို ၃၁ဇူလိုင်အထိပဲ ဝယ်ယူလို ့ရမှာပါနော်…🤗🤗
👉👉စုံစမ်းမေးမြန်းထားသော ချစ်ခရီးသည်များ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်း ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ နှစ်သက်ရာ အခန်းများ နှင့် အပျော်ရွှင်ဆုံး ခရီးစဉ်လေး တစ်ခု ဖန်တီးကြရအောင်နော်…📣📣
👉👉ထွက်ခွာမည့် ရက်ကတော့ – ဝ၅ အောက်တိုဘာ မှ ၁၀ အောက်တိုဘာ အထိ🥰🥰
👉👉၅ည အိပ် ၆ရက်ခရီးစဉ်မှာတော့ စင်ကာပူ၊ ပီနန်း၊ လန်ကာဝီ နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…🥰🥰.
👉👉နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံလုံး မှ ဒေါ်လာ ၉၉၀ ပဲကျမှာနော် ….🥰🥰
👉👉သင်္ဘောကလည်း Luxury လည်းဖြစ်ပြီး စင်ကာပူက ထွက်သမျှ သင်္ဘောတွေထဲမှာမှ အကြီးဆုံး သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ Genting Dream Cruise….🛳🛳🛳
👍👍အစားအသောက်တွေကလည်း တစ်နေ့ကို ၄ကြိမ်ကျွေးဦးမှာTea Break တွေပါထည့်တွက်မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၆ကြိမ် သူ့ထက်တန်တာတောင် သူ့လောက်မတန်နိုင်တော့ဘူးနော်…🤗🤗🤗